FAQ - Jiangsu Zhenjiang Kontex Electronics Co., Ltd.
Ny mpampitohy ny lafaoro RF
L29 (7/16) Series
Andian-dahatsoratra Attenuator / load
Ny vidin-tsika dia miova arakaraka ny famatsiana sy ny anton-tsena hafa. Haniraka anao ny lisitry ny vidin'ny fanavaozana aorian'ny fifandraisan'ny orinasanao aminay izahay raha mila fanazavana fanampiny.
Eny, takianay ny baiko iraisam-pirenena rehetra mba hanana habetsaky ny filaminana ambany indrindra. Raha mitady hivarotra ianao nefa amina habe kely kokoa dia manoro hevitra ianao hijery ny tranokalanay
Eny, afaka manome ny ankamaroan'ny tahirin-kevitra isika, ao anatin'izany ny Certificat de Analysis / Conformance; Insurance; Ny fiaviany sy ny antotan-taratasy fanondrana hafa izay takiana.
Amin'ny firy ny ora firesaka?
Ho an'ny santionany, ny fotoana fitarihana dia eo amin'ny 7 andro. Ho an'ny famokarana faobe dia 20-30 andro aorian'ny nahazoana ny fandoavam-bola. Manjary mandaitra ny vanim-potoana ireo rehefa 1) nahazo ny famandrihana nataonao, ary (2) nahazo ny fankatoavanao farany ny vokatrao ianao. Raha toa ka tsy mandeha amin'ny fe-potoana voatondro ireo loham-pianaranay dia midira fotsiny ny zavatra takinao amin'ny varotrao. Amin'ny toe-javatra rehetra dia hiezaka hanome ny zavatra ilainao izahay. Amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra dia afaka manao izany isika.
Manome antoka ny fitaovana sy ny asa izahay. Ny fanoloran-tenanay dia ny fahafaham-ponao amin'ny vokatra azontsika. Amin'ny garantiana na tsia, dia ny kolontsainan'ny orinasa iarahantsika sy mamaha ny olana rehetra an'ny mpanjifa amin'ny fahafaham-pon'ny tsirairay
Adiresy: Jifeng Industrial Park, tanànan'i Xinfeng, tanànan'i Zhenjiang, faritanin'i Jiangsu
Zhenjiang Kontex Electronics Co., Ltd. wi ...
Ahoana no fomba hiatrehana ny coating ambonin'ny t ...